Ichimoku Kinko Hyo: hal tilmaame, faa&#39;iido deggan | vfxAlert official blog
Ichimoku Kinko Hyo: hal tilmaame, faa&#39;iido deggan
Hal qalab ma noqon karo cunsur go'aaminta. Tani waa mabda'a ugu weyn ee falanqaynta farsamada ee dhammaan ganacsatada ka fikiraya sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah waa inay ilaaliyaan. Laakiin, waxaa jira waxyaabo ka reeban, sida Ichimoku Kinko Hyo, oo kaligeed heli karta heshiis sifiican ula jaan qaadaya aragtida Dow Theory “qiimaha wax walba waa la tixgeliyaa.”
Tilmaame-baraha waxaa loo sameeyay muujinta saamiga Nikkei (Japan), laakiin sida ku cad natiijooyinka sanado badan oo tababar ah oo ku saabsan firfircoonida Forex, waxaad sidoo kale heli kartaa faa'iido deggan, xitaa qaabka "caadiga ah" ee tilmaamaha. Xisaabintu waxay ku saleysan tahay isku celceliska celceliska, sidaa darteed Ichimoku ayaa ugu waxtar badan xilliyada isbeddellada. Marka kala duwanaanta dhinaca ay leedahay ballac dhan 20-30 dhibcood, waad furi kartaa xulashooyin deg deg ah markaad dib uga soo laabanayso khadadka Kumo Cloud!
Waqtiga Mid kasta oo ka mid ah M1-M15. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Jaantusku wuxuu muujinayaa shan xariiq, afar waxay muujinayaan qiimaha dhexdhexaadka ah ee tiro cayiman oo muddooyin taariikhi ah. Isbeddelka firfircoon ee iibsadayaasha / iibiyeyaashu wuxuu bilaabmayaa ka dib markii uu jebiyo khadadka qiimaha, oo la mid ah qaababka mawjadaha Elliott, laakiin halkan calaamadaha ayaa lagu kalsoonaan karaa.
Our saxda ah istaraatijiyad fursadaha binary adeegsanayaa saddex lines tilmaame:
SenkouSpan A / B ama Kumo Up / Down . Khadadka ayaa horay loogu sii jeediyaa waxayna siinayaan calaamadaha horseedka u ah isbeddelka isbeddellada.
Inta udhaxeysa khadadka 'SenkouSpan A - B' waa "Ichimoku Cloud (Kumo)", oo sida caadiga ah lagu muujiyo jaantuska iyadoo la sawirayo. Marka jaantuska qiimaha uu ka dhaqaaqo aaggan, waxay ka dhigan tahay isugeyn kumeelgaar ah, jabitaan / dib uga soo kabasho soohdimaha waxay siineysaa xaqiijintii ugu dambeysay calaamadaha kale.
Chinkou Span . Sadarka saddexaad ee hore wuxuu muujinayaa dhaqdhaqaaqa qiimaha guud iyo jihada.
Fursadaha binary calaamadaha ganacsiga
Ikhtiyaarrada ayaa loo furay sida ay wax u socdaan (dib u noqoshada iyo khadadka isgoyska) iyo kanaalka Kumo (jab ama ka soo laabo xuduudaha):
Ka gudubka "SenkouSpan A - B". Badanaa macnaheedu waa bilowga dib u soo celinta xagga Span A, oo si fiican u horseedi kara dib-u-noqosho kama dambeys ah. Calaamadda ayaa laga yaabaa inay ka horreyso xuubka, maaddaama labada sadarba ay ka horreeyaan qiimaha, laakiin xaaladdan, marwalba waxaan sugeynaa xaqiijinta tilmaamayaasha, sida CCI ama Momentum.
Sidee kale oo loo adeegsadaa calaamadaha binary-ka : waxaan u tixgelin doonnaa heerka isgoysku inuu yahay eber sida MACD ama 'Awesome Oscillator' - daruurta ka koreysa waxay siineysaa gelitaanka CALL iyo PUT haddii ay ka hooseyso heerka. Dhamaadka wicitaanka, waxaad furi kartaa xawaalad dheeri ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa weyn. Waxaan sidoo kale raadineynaa kaladuwanaanta daruuraha iyo oscillators, gaar ahaan waqtiga M30 iyo wixii ka sareeya.
Muhiim u ah ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah : burburka xariiqda 'Span b line' waa kaliya calaamadaha ugu horreeya ee isbeddelka xoogagga dibida / bears iyo dib u noqoshada suurtogalka ah Dheeraad ah, waxaa jiri kara tijaabooyin aan guuleysan oo heer ah, koror degdeg ah / hoos u dhac ku yimaada mugga, iyo dhacdooyinka kale ee aan u dhigmin istiraatiijiyadda ganacsiga. Haddii aad tahay qof bilow ah ha furin ikhtiyaar illaa xaaladdu si buuxda loo go'aaminayo!
Isbeddellada waxaa sameeyay Chinkou Span . Sida labadii sadar ee hore, waxaa jira isbeddel dhab ah oo dhab ah; waxaan leenahay Celcelis Dhaqdhaqaaq "gaabis ah" oo xaqiijinaya jihada guud ee dhaqdhaqaaqa qiimaha.
Burburka aagga Kumo . Waxaan si isku mid ah ugu baayacmushtaraynaa khadadka jaban. Iyada oo leh baaxad ballaaran, waxaan u furaynaa meherado sida ku saabsan tilmaamayaasha kanaalka caadiga ah (kooxaha Bollinger, Envelopes, iyo kuwa kale): ikhtiyaar ku yaal shumaca soo socda ka dib soo noqoshada, dhicitaanka ugu yaraan 3-4 shumac ee waqtiga.
Waxaa jira ganacsato fura ikhtiyaarka isla marka shumaca goos gooska ah ee udhow xadka Kumo uu xirmo. Marka isbeddelku sarreeyo, laga yaabee in qaabkani shaqeynayo, laakiin sida caadiga ah qiimaha u dhow dariiqa dariiqa “wuu gaabiyaa” xoogaa shumacyo ah mana dhihi kartid hubaal inay jiri doonto sii socosho dib u noqosho. Samir yeelo oo waqtiga ha sii galin kahor!
Xaaladda caadiga ah: Kumo leh isgoyska "Kijun-Tenkan". Jaleecada hore, calaamado la isku halleyn karo ayaa soo muuqday, isla mar ahaantaana, suuqa wuxuu ku jiraa xaalad aan hubin. Marka fur ikhtiyaar mise? Professional ganacsatada fursadaha binary waxaa lagula talinayaa in ay galaan uu dhacayo on soohdinta ka soo hor jeedda Kumo ah.
Marka qiimaha markii uu daruuraha ka tagayo ay la socoto fikrado fiiqan oo muddo gaaban ah, tani waa mid ka mid ah calaamadaha ugu xoogan. Halkan waxaad ka furan kartaa xisaabinta labadaba dib u noqoshada iyo sii wadida. Waxa ugu muhiimsan waa in la hubiyo in burburka uu run yahay oo had iyo jeer la xasuusto maaraynta lacagta.
Ujeedada ugu weyn ee tilmaamuhu waa in la xaqiijiyo qaababka garaafka iyo laambadda. Laakiin waxaad u dhaqmi kartaa si ka duwan: Ichimoku wuxuu bixiyaa calaamadda ugu horreysa, taas oo markaa lagu xaqiijiyo qaababka.
Gebogebadii, waxaan mar labaad idin xusuusinaynaa iyada oo xuduudaha aasaasiga ah ee Ichimoku Kinko Hyo, ay kuxirantahay astaamaha hantida, ay labaduba ku siin karaan calaamado la isku halleyn karo oo aad u daahi kara xitaa xilliyada H4-W1 (usbuuc). On Forex, fiiri sida ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u shaqeynayo loona yareeyo tirada xilliyada haddii loo baahdo.